Listen to Banira Giri's Karagar : Episode-1 "छाति च्यापेर हिँड्छ उ, मान्छे हुनुको गौरव, सम्भवत कोही हो भने, उ नै हो भगवत विजयी !" डा. वानिरा गिरीको 'मेरो आविष्कार' बाट साभार गरिएका हरफ सँगै सुरुहुने आजको रेडियोवाचन को यो नयाँ श्रृंखला मा हाम्रा चिरपरिचित रेडियो प्रस्तोता अच्युत घिमिरे डा. वानिरा गिरी को चर्चित उपन्यास 'कारागार' वाचन गर्दैहुनुहुन्छ । सँधै झैँ आज को यो श्रृंखला मा प्रविधिमा उज्वल अधिकारी ले साथ दिइरहनुभएको छ । वास्तविकतामा कैदीलाई थुनिने ठाउँ कारागार हो तर केही अन्तर्मुखीहरु आफैँ कारागार मा परेको अनुभव गर्छन् । यस्तै यस्तै प्रौढानारी को भावनालाई यो उपन्यास मार्फत उजागर गरिएको छ । उपन्यास को मज्जा लिन त, तपाई ले सुन्नै पर्छ, रेडियोवाचनमा, कारागार का अंकहरु !
जनैपूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन को अवसरमा यहाँहरु सबैलाई सुस्वास्थ्य र दिर्घायु को कामना सहित हार्दिक शुभकामना ! जनैपूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन को लागि आज, यहाँ नजिकै रहेको गोसाइस्थान गइएको थियो । वनेपा र धुलिखेल बिच २८ किलो भन्ने ठाउँबाट करिब १५-२० मिनेट उकालो चढेर गोसाइस्थान पुग्न सकिन्छ । यो ठाउँ, तालु डाँडा को नाम ले पनि चिनिने गरिन्छ । गोसाइस्थान मा विभिन्न चाडपर्वहरुमा मेला लाग्नेगर्दछ । गोसाइस्थान मा पुजाआजा गर्न तथा रक्षाबन्धन बाँध्न को लागि, काठमाडौँ, धुलिखेल, वनेपा, पनौती लगायत का विभिन्न ठाउँहरुबाट भक्तजनहरु आएकारहेछन् । रसुवा को गोसाइकुण्ड मा झैँ यहाँ पनि गोसाइस्थानमा भक्तजनहरु को ठूलो घुँइचो थियो । यही जनैपूर्णिमा र रक्षाबन्धन को अवसरमा, गोसाइस्थान मा लिइएका केही तस्विरहरु यहाँ राख्दैछु । मन्दिर मा भित्र छिर्न र बाहिर निस्कन भक्तजनहरु को भिड । पैसो खोज्दैछन्, पानीभित्र चुम्बक बाँधिएको बल्छि थापेर ! झाँक्रिहरु ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै, काम्दै, उफ्रदैछन् ! (छेउमा यसो नजिकै पुगेको थिँए, रक्सी को गन्ध ह्‍वास्स नाकमा पर्‍यो) भ्याइनभ्याई छ, बाहुन बाजे लाई ! (डोरो बाँधिसकेपछि, टिक